7 Zvishandiso ZveInfluencer Kushambadzira Tsvagiridzo Inoenderana Neyako Niche | Martech Zone
Nyika inogara ichichinja uye kushambadzira kuri kuchinja nayo. Kune vatengesi, kusimudzira uku imari ine mativi maviri. Kune rimwe divi, zvinonakidza kugara uchisangana nazvo kushambadzira maitiro uye kuuya nemazano matsva.
Kune rimwe divi, sezvo nzvimbo zhinji dzekushambadzira dzichimuka, vatengesi vanobatikana - isu tinofanirwa kubata nzira yekushambadzira, zvemukati, SEO, mapepanhau, social media, kuuya nemishandirapamwe yekugadzira, zvichingodaro. Neraki, isu tine maturusi ekushambadzira ekutibatsira, kuchengetedza nguva, uye kuongorora data isu hatingakwanise neimwe nzira.
Influencer kushambadzira haisi maitiro matsva - pari zvino, inzira yakasimbiswa uye yakavimbika yekusimudza yako brand awareness uye kuunza vatengi vatsva.
75% yemhando dzakagadzirirwa kutsaurira bhajeti rakasiyana rekupesvedzera kushambadzira muna 2021. Kana paine, makore mashanu apfuura akaita kuti kushambadzira kwepesvedzero kuwanikwe kune madiki brand, asi panguva imwechete yakaoma uye inochinjika.
Mazuva ano, chero chigadzirwa kana sevhisi inogona kusimudzirwa nekushambadzira kushambadzira asi vatengesi vari kutarisana nematambudziko matsva nevanokurudzira. Ivo vanoda kuziva mawaniro emusiki anoenderana nemhando yavo, maitiro ekutarisa kana vari kutenga vateveri uye kubatanidzwa, uye maitiro ekuona kuti mushandirapamwe wavo unoshanda.
Sezvineiwo, kune maturusi ekushambadzira anokubatsira kuti uwane iwo akanakisa pesvedzero kune yako niche uye mhando yemhando, ongorora izvo zvinosvika zvaungatarisira kubva mukubatana navo, uye ongorora yako pesvedzero mushandirapamwe kana wapera.
Muchikamu chino, tichavhara maturusi manomwe emabhajeti akasiyana uye zvinangwa. Iwe unogona kusarudza iyo inokodzera iwe zvakanyanya uye kuchengetedza nguva pane influencer kushambadzira tsvagiridzo.
Awario inogonesa mabhizinesi nevashambadziri kuwana mamicro- uye macro-influencers mune yako niche.
Awario chishandiso chikuru chekutsvaga marudzi ese evapesvedzera, makuru kana madiki, niche kana makuru. Kubatsira kwayo kuchinjika - hauna preset zvikamu zvaunotsvaga kune vanofurira senge nezvimwe zvakawanda zvinopesvedzera zvekushambadzira maturusi.
Pane kudaro, iwe unogadzira yambiro yesocial media yekutarisa iyo inokutendera iwe kuti utarise kune vanofurira vachitaura chaiwo mazwi akakosha (kana kuashandisa mumabios avo, nezvimwewo). Aya mazwi akakosha anogona kunge ari mabhureki chaiwo mu niche yako, vakwikwidzi vako vakananga, rudzi rwezvigadzirwa zvaunogadzira, uye mazwi ane chekuita neindasitiri - muganho ndiwo fungidziro yako.
Tora kanguva ufunge nezve rudzi rwemupesvedzeri waunoda kuwana uye kuti ndeapi mitsara yavaizoshandisa muzvinyorwa zvavo uye zvinyorwa.
Awario anobva atora nhaurirano dzepamhepo dzinotaura aya mazwi makuru uye ozviongorora kuti asvike, manzwiro, uye boka revanhu uye psychographic metrics. Vanyori vakanyanya kusvika pazvinyorwa zvavo vanowedzerwa kune Influencers report.
Chirevo chinokuratidza iwe vanofurira vakaputswa nemapuratifomu (Twitter, YouTube, zvichingodaro) nekusvika kwavo, nhamba yenguva dzavakataura mazwi ako akakosha, uye manzwiro avakataura. Unogona kuongorora rondedzero iyi uye uwane vagadziri vakakodzera. Chirevo chinogona kugovaniswa zviri nyore kuburikidza negore kana PDF nevaunoshanda navo uye vanobatana.
Kana iwe uchitsvaga anofurira ane imwe nzira yekusvika (semuenzaniso, 100-150 zviuru zvevateveri), unogona kuvawana muMement Feed. Kune iri nyore sefa panhi inobvumidza iwe kusefa kunze maakaundi ine imwe nhamba yevateveri. Iwe unogona kuwedzera kusefa iyi data nemanzwiro, nyika yekwakabva, nezvimwe.
Zvinofanira kutaurwa kuti Awario haingori chishandiso chekushambadzira uye inopa akawanda anobatsira ekushambadzira ekuona kweanokwikwidza, kuronga mushandirapamwe, uye yesocial media yekutarisa.
Iwe unofanirwa kuedza Awario kana:
Iwe une chaizvo zvinodikanwa kune vanofurira mupfungwa
Iwe unoda laser-kunanga yako influencer mushandirapamwe
Iwe unoda akawanda-chinangwa chishandiso icho chinokwanisa kuvhara kupfuura pesvedzera kushambadzira
Awario inopa yemazuva manomwe yemahara muyedzo waunogona kuyedza nawo Vanofurira vanoshuma.
Mitengo inotangira pamadhora makumi matatu nemapfumbamwe pamwedzi (39$ kana ukatenga chirongwa chegore rose) uye zvinoenderana nekuti ikurukurirano yakadii kuunganidza nekuongorora.
Upfluence ndiyo yakanakisa influencer dhatabhesi yeE-commerce mhando. Maturusi mazhinji ekushambadzira akavakirwa padhatabhesi - kabhuku kevapesvedzera kana uchida. Upfluence ndiko kufambira mberi kwechisikigo kweiyi pfungwa. Iyo yakakura online dhatabhesi yevapesvedzera iyo inogara ichigadziridzwa uye nekuwedzerwa nemaalgorithms anoongorora maprofile evagadziri pane akawanda masocial media mapuratifomu.
Zvekare, uri kushandisa mazwi akakosha kutsvaga vagadziri, asi panguva ino chishandiso hachitange kutsvaga kutsva kubva kutanga. Asi, inobatanidza kuburikidza nedhatabhesi yayo kuti uwane iwo maprofile ane akakodzera ma tag ane hukama neako makiyi. Chii chinoparadzanisa Upfluence kubva kune mamwe anofurira dhatabhesi kugona kugovera huremu kune akasiyana makiyi mazwi.
Semuyenzaniso, iwe uri kutsvaga yemararamiro anopesvedzera kusimudzira yako ine tsika-yakagadzirwa homeware. Unogona kugadzira kushongedzwa kwemba uye mukati mekugadzirwa iwo makuru mazwi uye sarudza zvine tsika, Bhizinesi duku, zvevakadzi sechipiri mazwi makuru. Iwo anozove akakosha pakutsvaga kwako, asi haazoite basa rakakura semazwi ako makuru.
Kana yako huru puratifomu iri Instagram, iwe unokwanisa kusefa zvinofurira zvichienderana nehuwandu hwevanhu sezera, murume kana murume, uye nzvimbo (kana vanofurira vakaratidza mvumo yekuwana iyi data).
E-commerce zvitoro zvinozokwanisa kuwana zvakatonyanya kukosha kubva kune chishandiso chekutsvaga vanopesvedzera pakati pevatengi vavo varipo. Upfluence inogona kusanganiswa neCMR yako uye webhusaiti kuona vatengi vane akawanda emasocial media vateveri. Rangarira, vatengi vako vanogara vari vatengesi vako vakanyanya, uye kana vaine vateereri vavo, kungave kusava nehanya kuvaregeredza.
Pamusoro pekupesvedzera kutsvaga, Upfluence inopa inogoneka dhatabhesi kwaunogona kuronga vanofurira vanofarira. Unogona kuwedzera minda uye kusiya ma tag kuti uwane vanhu vaunoshanda navo zviri nyore. Kunze kwezvo, iwe unogona kubatanidza ese email tsamba pakati pako neane influencer kuti zvive nyore kutaura. Kune zvakare chikamu chehupenyu hwekutarisira chinokuratidza kufambira mberi kwako kune wega wega anofurira - wauri kutaurirana naye, wawakamirira kuti apedze zvirimo, akamirira kubhadhara, izvo zvinhu zvemhando.
Zvese mune zvese, Upfluence inotarisana nekufambisa hukama hwenguva refu pakati pemabhureki nevanofurira, saka kutarisisa kwavo hakusi pakuwana pesvedzero chete asi kutaurirana uye kubatana zvakare.
Iwe unofanirwa kuedza Upfluence kana:
Shanda ne e-commerce uye online zvitoro
Unoda pesvedzero yekushambadzira chikuva yekutsvaga uye manejimendi
Vavarira kuvaka hukama hwenguva refu nevanokurudzira
Upfluence ndeye Enterprise-level chikuva. Inopa iwo chaiwo mitengo pakubata mushure mekunge maneja avo akwanisa kuona zvaunoda. Kune matatu preset zvirongwa zvinosiyana nehuwandu hwevashandisi uye kuwana mishumo uye kubatanidzwa.
Iko kune yemahara Chrome yekuwedzera yekukurumidza kuongorora chimiro cheanofurira.
Nepo BuzzSumo isiri yakanyatso kupesvedzera kushambadzira chishandiso, inobvumira vashandisi vayo kuwana inonyanya kufarirwa zvemukati zvemukati uye kuongorora vanyori vari shure kwayo. Nekudaro, inogona kuve nzira inoshamisa yekuwana vanofurira vane zvinyorwa zvinowana zvakawanda zvekubatikana uye nekudaro avo vane vateereri vakavimbika uye vanoshanda.
Kutsvaga muBuzzSumo zvakare kwakavakirwa pamazwi akakosha. Iwe unogona zvakare kusarudza mafirita anozoshanda pakutsvaga kwako kusanganisira zuva, mutauro, nyika, zvichingodaro. Mhedzisiro yacho ichaverengerwa nehuwandu hwezvibvumirano zvavakagadzira - zvinoda, mashare, uye makomendi. Iwe unogona ipapo kutsvagisa vanyori veaya mapositi kuti unzwisise kuti ndeapi ayo ari mavhairasi mapositi kubva kune akajairwa vashandisi vesocial media, uye ayo akagadzirwa nevanofurira, uye kusvika kune iwo ekupedzisira.
Buzsummo's Trending Zvino chimiro zvakare chishandiso chinobatsira kwazvo chinokutendera kuti ugare pamusoro peazvino maitiro muindasitiri yedu. Zvese zvaunoda kuti uite kugadzira chinyorwa chekare chinotsanangura niche yako uye software inokuratidza zviri kuitika mune ino niche. Chinhu chakanakisa kuwana vagadziri vari kusimukira mumunda wako.
Iyo chikuva inopawo yakatwasuka Influencer yekutsvaga, kunyangwe paine kakumonyorora kwairi. BuzzSumo's Vepamusoro Vanyori inoratidza inokamura vapesvedzera muzvikamu zvinotevera:
Vanhu venguva dzose
Unogona kusarudza akawanda mapoka ekutsvaga. Kutsvaga zvakare kunoenderana niche-ane hukama mazwi aunopa. Mhedzisiro yacho inokupa iwe ruzivo rwakawanda pamusoro pevanyori kusanganisira nhamba yevateveri vavo pamapuratifomu, webhusaiti yavo (kana vaine imwe) uye nechiremera chayo, kukosha, nezvimwe.
Iwe unofanirwa kuedza BuzzSumo kana:
Uri kutsvaga mablogger
Pane chirongwa chemahara chinokupa 10 kutsvaga pamwedzi, zvisinei, iyo Yepamusoro Vanyori kutsvaga haina kubatanidzwa. Iwe unogona zvakare kuedza chirongwa chese mahara kwemazuva makumi matatu.
Tanga Yemazuva makumi matatu Yemahara Muedzo weBuzzSumo
Mitengo inotangira pamadhora makumi mapfumbamwe nemapfumbamwe pamwedzi uye inosiyana zvichienderana nemhando dziripo. Iyo Yepamusoro Vanyori chimiro chinongowanikwa muHuru chirongwa chinotengeswa nemadhora mazana maviri nemakumi mapfumbamwe nepfumbamwe pamwedzi.
Hunter.io inowana kero dzeemail zvako. Unogona kutsvaga zana pamwedzi pachirongwa chemahara. Iwe unopinza zita rezita muinjini yavo yekutsvaga uye Hunter.io ichaita nepainogona napo kuwana maero eemail akabatanidzwa kune iyo domain.
Hunter.io inogona kunyanya kubatsira pakutsvaga email kero dzevanhu vangave vakakosha kusangano rako. Semuenzaniso, sechikamu chemushandirapamwe wako wekupesvedzera, unogona kuda kukumbira muenzi wekubloga positi pane ine simba blog mune yako niche. Zvinogona kunetsa dzimwe nguva kuwana iyo email kero chaiyo paunenge uchifanira kutaura navo nechikumbiro chako. Unogona kuisa zita remunhu uye webhusaiti yekambani muHunter.io, uye ichauya nekero yeemail yakakurudzirwa.
Kana iwe uchifunga kuti une email kero yekutevera asi usina chokwadi, unogona kuisa iyo kero muHunter.io, uye inozoona kana iyo email kero iriko.
Iwe unogona zvakare kushandisa Hunter.io seplug-in. Mune ino kesi, kana iwe uchienda kune imwe webhusaiti iwe unogona kudzvanya pane iyo Hunter.io icon mubrowser yako uye inowana chero echokwadi email kero akasungirirwa kune iyo domain.
Iwe unofanirwa kuedza Hunter.io kana:
Iwe unotova nerondedzero yevateveri vaunoda kusvika kwavari
Iwe uri mukati mekugadzira yako yega dhatabhesi yevapesvedzera mune yako niche
Iyo yemahara vhezheni inokupa makumi maviri neshanu ekutsvaga pamwedzi.
Tsvaga Email Kero naHunter
Zvirongwa zvakabhadharwa zvinotanga pa49 euros uye zvinosanganisira zvimwe zvekutsvaga uye maPrimum maficha akadai seakawanda analytics uye CSV kurodha.
Nepo mamwe maturusi ari pane iyi runyorwa achikubvumidza iwe kuti utsvage vateereri vako zvakare, Sparktoro inovimba nekutsvagisa kwevateereri kuti uwane vanofurira. Zvinoreva, kuti iwe unotanga watsvaga vateereri kuburikidza neSparktoro wobva waishandisa kufunga kuti ungasvika sei kwavari.
Kana wangovhura chishandiso, unogona kuwana vateereri nekunyora pasi:
zvavanogara vachitaura nezvazvo;
ndeapi mazwi avanoshandisa munhoroondo yavo;
ndeapi mawebhusaiti avanoshanyira;
uye ma hashtag avanoshandisa.
Pfungwa iwe, unongodiwa kupindura imwe yeiyi mibvunzo kuti uwane vateereri vako. Vamwe vese vanozopindurwa nemhedzisiro yeSparktoro - pamwe nesocial media account vateereri vako vanotevera.
Kana iwe uchivavarira kushandisa Sparktoro yekupesvedzera kutsvagisa, yako yakanyanya kutarisisa ichave mibairo inoratidza zvinotevedzwa nevateereri vako, kushanya, uye kuita nazvo. Sparktoro inokamura izvi mhedzisiro muzvikamu zvina:
Vazhinji vaitevera masocial media account
Maakaundi emagariro ane kudiki kusvika asi kubatanidzwa kwakanyanya pakati pevateereri vako
Mawebhusaiti akawanda akashanyirwa
Mawebhusaiti ane traffic shoma asi yakanyanya kubatikana
Rondedzero iyi inokubatsira kuti uone vanhu vanonyanya kufarirwa mune ino niche asiwo vanonyanya kubatikana nevanhu, vachikuratidza iwe madiki-influencers ane anobatikana uye anoshanda anotevera.
Sparktoro inokuratidzawo kuti ndezvipi zvinodyiwa nevateereri vako pamhepo: ndeapi mapodcasts avanoteerera, ndeapi maakaundi enhau avanoteera, uye nzira dzeYouTube dzavanoona.
Iwe unofanirwa kuedza Sparktoro kana:
Iwe hauzive kuti ndevapi vateereri vako vavanoda kana kuti unoda kutsvaga mutsva
Iwe unoda kunzwisisa nzira yekusvika kune vateereri vako kuburikidza neinternet zvemukati
Chirongwa chemahara chinopa kutsvagisa kushanu pamwedzi, zvisinei, zvirongwa zvakabhadharwa zvinowedzera maakaundi ane simba uye chiteshi kuti usvike kune chako chinangwa chevateereri. Mitengo inotangira pamadhora makumi matatu nemasere.
Followerwonk chishandiso che Twitter chinopa akasiyana siyana analytics evateereri papuratifomu. Inopawo inopesvedzera tsvagiridzo inonzwisisika yakatarisana ne Twitter influencers.
Unogona kuishandisa kuchera zvakadzika mune yako Twitter analytics. Iwe unogona kutsvaga Twitter bios, kubatanidza nevanofurira kana mafeni, uye kuaputsa nenzvimbo, chiremera, nhamba yevateveri, nezvimwewo. Inopa mumwe nemumwe we Twitter mushandisi wepasocial chinzvimbo zvichienderana nenhamba yevateveri uye kubatanidzwa ratio yavanayo. Unogona kushandisa zvibodzwa izvi kuona kuti yakakurumbira influencer.
Zvakadaro, kutsvaga hakungoite kune mamwe maakaundi. Iwe unogona kutsvaga izwi rakakosha izwi (rudzi rwako, semuenzaniso), uye Followerwonk achauya nerondedzero yeakaundi ese e Twitter ane izwi iro mune yavo bios.
Iwe unofanirwa kuedza Followerwonk kana:
Nzvimbo huru yevateereri vako i Twitter
Saina kune Followerwonk Yemahara
Chishandiso chemahara. Kune mavhezheni akabhadharwa ane mamwe maficha, mitengo inotangira pamadhora makumi maviri nemapfumbamwe.
Kana iwe uchida kutarisa pane yakawanda yechinyakare chikuva chevasiki vepamhepo, ichi chishandiso chako.
Nekugona kutsvaga kuburikidza ne Instagram neYouTube nemazwi akakosha, NinjaOutreach inowana vanofurira vane yakanyanya kudzvanya, kupindirana, uye traffic.
Kungofanana neUpfluence, NinjaOutreach inoshanda zvakanyanya sedhatabhesi yeYouTube uye Instagram influencers. Iyo inobata pamusoro pe78 miriyoni yemagariro midhiya uye blogger profiles iwe yaunogona kubata uye inobatsira kushandura yako yekutaura kuti ifambise kubatana kwako nevapesvedzera.
Iyi puratifomu inoita kuti nzira yekufambisa inyanyoita nyore sezvo ichipa maemail evanofurira vese mudura rayo uye inobvumidza iwe kuvaka yako CRM. Iwe unogona kugovera kuwana nechikwata chako uye kuteedzera nhoroondo yekutaura kuti uve nechokwadi chekuti munhu wese anogara achizviziva.
Iwe unofanirwa kuedza NinjaOutreach kana:
Iwe unoda ipuratifomu inogonesa zvese zviri zviviri kutsvagisa uye nzvimbo dzekusvika dzekukurudzira kushambadzira
Iwe uri kutarisa yako kukurudzira mushandirapamwe paYouTube uye Instagram
Pane muyedzo wemahara uripo (ruzivo rwekadhi runodiwa). Zvirongwa zviviri izvi zvinodhura $389 uye $649 pamwedzi uye zvinosiyana nehuwandu hwemaemail aripo, maakaundi echikwata, uye vanobatika.
Tanga NeInfluencer Outreach Nhasi
Sezvaunoona, izvo zvinopesvedzera zvekushambadzira maturusi zvinopa yakakura siyana kune chero mushambadzi, zvisinei nebhajeti kana zvinangwa. Ini ndinokukurudzira kuti uedze iyo yemahara vhezheni yezvishandiso zvakabata ziso rako uye ona zvavangaite kune yako brand. Zvishoma, unogona kutanga kutevedzera vanofurira vaunoona kuti utange kushamwaridzana navo, uchinzwisisa niche yavo uye kutarisa, uye pamwe nekutosvika kwavari nezvekusimudzira zvigadzirwa nemasevhisi ako.
kuburitsa: Martech Zone yakawedzera affiliate links kuchinyorwa ichi.
Tags: awariobuzzsumoecommerce influencersfacebook influencerstsvaga mablogikitsvaga mhandotsvaga makambanitsvaga email kerotsvaga vanokurudziratsvaga vatori venhautsvaga vatori venhaumuvhimimuvhimi.iokuchinjakushambadzira kushambadzirainfluencer marketing research toolsKufuridzira Kutsvagisainfluencer research marketing toolsinstagram influencersmicro-influencernano-influencermedia media activencerstiktok vanokurudziratwitter influencersupfluenceyoutube influencers